Quburo Ajaanib ah oo ka qeyb qaadaneysa Dastuurka Somaliya | Anti-Tribalism
← Sh. Shariif : Farmaajo anigaa Keeney. “ Sheeko siyaaadeed “
Amb. Amerika oo Abaalmarin lagu gudoonsiiyay Xaflad Holland loogu qabtay+ Sawiro →
Quburo Ajaanib ah oo ka qeyb qaadaneysa Dastuurka Somaliya
Muqdisho: (Moment Media Group) Dowladda KMG Soomaaliya ayaa sheegtay in quburo Ajanibi ah ay ka qeyb qaadan doonaan sameynta Dastuurka cusub ee Soomaaliya, iyadoo warkaasi maanta uu ka soo baxay wasaarada Dastuurka.
Wasiirka wasaarada Dastuurka iyo Arimaha Fedaraalka xukuumada KMG Soomaaliya C/raxmaan Xoosh Jabriil oo maanta saxaafada shir jaraa’id ugu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu qiray in qubaro ajaanib ah ay ku lug leeyihiin howlaha dastuur u sameynta dalka Soomaaliya.
C/raxmaan Xoosh Jabriil ayaa waxa uu tilmaamay in qubarada ajaanibta ah ay ka saacidayaan gudiga madaxa banaan ee howlaha dastuur u sameeynta dalka Soomaaliya qaab farsama ahaan ah, isagoo tusaale u soo qaatay in dastuurkii 1960-kii markii la sameynayay ay ka tala bixiyeen qubaro u dhashay dalka Talyaaniga oo mar gumaysan jiray gobolo kamid ah dalka Soomaaliya.
Wasiirka wasaarada Dastuurka iyo Arimaha Fedaraalka xukuumada KMG Soomaaliya C/raxmaan Xoosh Jabriil mar la weydiiyay su’aal ahayd qaabka la isku waafajin karo qodob kamid ah dastuurka qabya qoraaleedka ah kuwaasi oo qeexaya in dadka isku soo sharaxaya qabashada xilalka sare, shuruudaha kaliya ee horyaala ay tahay in uu yahay qof muslin ah oo Soomaali ah taasi oo muujinaysa in haweenku ay qayb ka noqon karaan iyo waliba dhaqanka Soomaalida iyo diinta islaamka.
C/raxmaan Xoosh ayaa sheegay in taasi aysan jirin wax ku jaban, isagoo tusaale u soo qaatay wadamo farabadan oo muslim ah sida wadamada Bangaaladheesh iyo Bakistaan oo uu tilmaamay in ay hogaanka u qabteen haween kuwaasi oo gaarsiiyay hormar sida uu hadalka u dhigay.
Mudooyinkii ugu damneeyay waxaa jiray hadalo kasoo yeerayay qaybaha kaladuwan ee bulshada Soomaaliyeed kaasi oo ku aadan in dastuurkan ay ku jiraan qodobo qaarkood ka hor imaanaya shareecada islaamka iyo dhaqanka Soomaalida islamarkaana la doonayo in lagu kala qaybiyo shareecada islaamka.
Aqriso oo la soco Moment Media Group Saacad Walba si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya.